TSIHOMBE : Tompon’andraikitra ara-pahasalamana mpirotsaka an- tsitrapo 24 nahazo fiofanana · Aponga
Eo anatrehan’izany dia ilàna fanohanana izy ireny, na izany ara-bola na ara-pitaovana. Tsy ferana ihany koa anefa ny fanohanana azy ireny ara-traikefa satria anisany sehatra saropady izany tontolon’ny fitsaboana izany. Mahakasika izay indrindra dia nomena fiofanana ireo tompon’andraikitra ara-pahasalamana mpilatsaka an-tsitrapo 24 mianadahy miasa ao anatin’ny faritra Androy. Tanjona ny hanatsaràna ny kalitaon’ny fitsaboana amin’ny ankapobeny ka tao amin’ny distrikan’i Tsihombe no nanatanterahana izany nandritra ny telo andro.
Araka ny fantatra dia vokatry ny fiaraha-miasa matotra teo amin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny Unicef, izay mamatsy vola, no nahatontosana izany hetsika izany. Ny Unicef ihany koa izay manome ny tambin-karaman’ireo mpiasan’ny fahasalamana mirotsaka an-tsitrapo. Tanjona amin’izao hetsika izao, araka ny fanazavana, ny mba hanamaivanana ny vesatry ny asa ataon’ny mpitsabo eny amin’ny tobim-pahasalamana tsirairay.
Hetsika izay isany vahaolana naroson’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka rahateo. Tsara ny manamarika fa efa niasa teny anivon’ny tobim-pahasalamana izy ireo talohan’izao fanamafisana traikefa izao araka ny fanazavana nataon’ny « adjoint technique du médecin inspecteur » ao Tsihombe. Tombony lehibe ho an’ny faritra Androy izao fitombon’ny mpitsabo izao satria rehefa salama ny vahoaka afaka miara-miasa malalaka mampandroso ny fihariany.